गोरखामा भएको यस्तो घटनाले मानिसहरु हैरान, गाउँले सबै मिलेर एउटा बोकामाथि यस्तो गरे:: Naya Nepal
काठमाडौं । नेपालका लागि होण्डा मोटरसाइकल तथा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा. लि. ले नेपालीहरुको महान चाड दशैलाई लक्षित गरी “हर एक नेपालीलाई १ रुपैयाँमा होण्डो” नामक योजना ग्राहकवर्गहरु माझ ल्याएको छ ।
असोज ११ गते मंगलवारका दिनदेखि लागू हुने यस योजना अविधि भर ग्राहकहरुले होण्डाको कुनै पनि बाइक वा स्कुटर मात्र १ रुपैयाँको डाउनपेमेन्ट वा १ रुपैयाँको इएमआई र १ प्रतिशतको ब्याजदरमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
स्याकार इन्भेष्टमेन्ट भएका स्थानहरुमा लागू हुने यस फाइनान्स योजनामै ग्राहकहरुले आकर्षक नगद उपहारका साथै अन्य थुप्रै सुविधाहरु समेत प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस योजना अन्तर्गत खरिदकर्ताहरुले होण्डा मोटरसाइकल वा स्कुटरको खरिदमा स्त्र्mयाच कुपन मार्पmत १ लाख सम्मको नगद छुट, ७ वर्षसम्मका लागि फ्रि बोनस सर्भिसिङ्गका साथै ७ वर्षको लागि स्पेयर पार्टस्मा ७ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
यसका साथै होण्डा बिग बाइकको खरिदमा ग्राहकहरुले आकर्षक नगद छुट प्राप्त गर्नुहुनेछ । थप जानकारीका लागि ग्राहकहरुले होण्डाको टोल फ्रि नम्बरहरु १६६००१४६६३२ (नमस्ते) ९८०१५७११११ (एनसेल) मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
भर्खरै ताइवानको ज्वालामुखी नजिक शक्तिशाली भूकम्पको धक्का
सिन्हुआ । पूर्वी ताइवान भर्खरै शक्तिशाली भूकम्पको धक्का भएको छ । यो अत्यन्तै तीव्र भएको जनाइएको छ । चीनको भूकम्प नेटवर्क सेन्टरका अनुसार भूकम्प ५ म्याग्निच्यूड को भएको बताइएको छ ।
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु २४ दशमलव ८५ डिग्री उत्तरी अक्षांश र १२२ दशमलव १४ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा रहेको बताइएको छ । यो भूकम्पको गहिराई ११६ किलोमिटर तल रहेको जनाइएको छ । यो भूकम्प शान ताओमा रहेको ज्वालामुखीबाट मात्र २२ किलोमिटर नजिक रहेकाले धेरै क्षति भयो कि भन्ने आशंका गरिएको अन्र्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले जनाएका छन् । आजै सामोआ र टोंगामापनि ५ दशमलप १ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।